Mobile Kutenga mune ecommerce | ECommerce nhau
Iko kunokanganisa mafoni kuri kuita pahupenyu hwemabhiriyoni evanhu hutsinye. Uye chishandiso chaunogona kuita nacho zvinhu zvakawanda. Pakati pevamwe, tenga. Chimwe chinhu chiri kuwedzera nekuda kwekushandisa kwemafoni kusevha paInternet kuri kuwedzera.
Nhare inoenderera ichitamba chinowedzera kukosha basa mukubudirira kwe e-commerce. Pakazosvika 2021, mobile e-commerce kutengesa inotarisirwa kuverenga 54% yehuwandu hwee-commerce kutengesa.
Kuwedzera pakushandisa nharembozha kutenga, vatengi vanoshandisa nharembozha kutsvagurudza zvekutenga zvisarudzo vasati vatenga muchitoro kana padhesiki. Inofungidzirwa kuti 73% yevatengi vanoti vanofarira kusevha paInternet vasati vatenga muchitoro. KuBrightEdge, isu tanga tichiteedzerawo kukura kwee-commerce. Isu takaona kuti mu2017, 57% yeese online traffic yakabva kune nharembozha uye mapiritsi, ayo anga aine mhedzisiro inokanganisa hunhu hwee-commerce.
1 Icho chikonzero cheMobile Shopping
2 Chii chinonzi kushambadzira nhare?
3 Zvakanakira nekuipira kwekushambadzira nhare
4 5 makiyi ekushambadzira enhare ezvitoro zvepamhepo
5 Maitiro ekuona yako mobile traffic mu Analytics
Icho chikonzero cheMobile Shopping
Iko kusununguka kwevatengi nekutenga nharembozha kwakura, uye nekudaro iyo indasitiri haichakwanise kukanganwa kukosha kwe mobile munyika ye e-commerce.
Ndingaite sei kuti ndiwedzere nharembozha e-commerce?
Nharembozha ecommerce vatengi senge iwe unofanirwa kunge wave kushandisa webhusaiti iyo inoshanda neanoteerera dhizaini modhi mukati mesaiti, asi pane zvinhu zvakati wandei zvaunogona kuita kuti peji rako reecommerce riwedzere kushamwaridzana nhare.
Ita kuti zvive nyore kuti vanhu vawane chitoro chaicho
Sezvo vanhu vazhinji vachida kuenzanisa kutenga pamhepo vasati vatenga muchitoro, zvichiita kuti kusvetuka kubva kushopu yepamhepo kuenda kune-munhu kutenga kuve nyore.
Batsira vatengi kuti vanzwisise zvigadzirwa.
Sanganisira nharembozha-inoshamwaridzika chigadzirwa mavhidhiyo, kugona kuswededza mukati memifananidzo, uye zvemhando yepamusoro zvinoonekwa kubatsira vatengi kunzwisisa chigadzirwa chako uye vanzwe kuzvivimba vasati varova bhatani rekuti 'tenga'.
Ita kuti zvive nyore kuti vanhu vawane kubhadhara
Kubhadhara kunogona kuomera vashandisi vefoni mbozhanhare nekuti kuteedzana kwenguva refu kwenhamba, senge idzo dzinodiwa kadhi rechikwereti kana cheki, zvinowanzo kunetsa kunyora. Pane kudaro, iwe unogona kupa vanhu kugona kwekugadzira account pane yako saiti, kwavanogona kusevha yavo kiredhiti kadhi ruzivo. Iwe unogona zvakare kuita kuti zvive nyore kwavari kuti vashandise sarudzo dzekubhadhara nhare, senge PayPal, Google Wallet kana MasterCard MasterPass. Imwe ongororo yakawana kuti kupa idzi dzimwe nzira kune vashandisi kwakatungamira kune 101% kuwedzera kwekushandurwa kwemitengo yevanoshandisa smartphone.
Rangarira kuti zvakaoma sei kunyora ruzivo pane nhare mbozha. Deredza mafomu pane peji uye wobva wazadza zvaunogona.
Nharembozha e-commerce iri kukurumidza kuve indasitiri yakakosha. Mhando dzinofanirwa kuve dzakagadzirira kushandira vatengi ava online uye muchitoro. Nhanho yekutanga mukugadzira ichi chinoshamisa chiitiko chevashandisi ndeyekuti uve nechokwadi chekuti saiti yako inofamba chose.
Mhedzisiro yekushandisa kwako
Muchinyorwa chanhasi tinokuudza kuti kushambadzira kwemafoni kune chitoro chepamhepo uye zvaunofanirwa kuita kudzivirira kurasikirwa nevatengi semuenzaniso wapfuura.
Pfungwa yekutengesa nhare, sekutsanangurwa kwayakaitwa muWikipedia, inzira yekutengesa pamhepo yakawanda yakanangana nekusvika kune vamwe vateereri pamafoni avo, mahwendefa kana chero chimwe chinhu chakabatana kuburikidza nemawebhusaiti. Inosanganisira zvese zviitiko zvine chekuita nekugadzirwa, kuitiswa uye kuitwa kwezviito zvekushambadzira.
Kutanga kubva pane iyi dudziro yekutanga, isu ticha tarisa pachikamu chekupedzisira: "dhizaini, kuitisa uye kuita", nekuti izvi ndizvo chaizvo zvatichaita: chinja e-commerce zviito zvedu kubhurawuza nhare.
Kukosha kwekushambadzira nhare
Izvo zvese zvakaitika pakupera kwa2016, asi isu takazviona zvichiuya zvakanyanya. Musi waNovember 1, Global Stats yakaburitsa mushumo ichiti kushandiswa kwemidziyo mbozha kwaive kwakakura kupfuura iko kwemacomputer ako kwekutanga. Kushambadzira kwenhare kwaive mukutonga uye izvo hazvitarisirwe kuchinja kuenda kumberi.
Vanhu havangoshandisa chete piritsi ravo kana nharembozha kutarisa maemail kana netiweki dzekudyidzana, asi vanozvishandisawo kuenzanisa nekutenga zvigadzirwa. Kutengesa nharembozha haisisiri sarudzo yezvitoro zvepamhepo, chisungo.
Zvakanakira nekuipira kwekushambadzira nhare
Isu tinoziva kuti kushambadzira nhare kuri kunze kwemachati uye nekudaro chinofanira, asi tisati tadzika kubhizinesi, ngatitarisei mabhenefiti nematambudziko aachasangana nawo.
Kuwanika uye nekukurumidza: vashandisi vanogara vachitakura nharembozha dzavo uye vozvitarisa kanokwana ka150 pazuva paavhareji. Gadzirira iyo nguva yako! 😉
Dhizaini dhizaini: kudhizaina uye kugadzira zvemukati zvemafoni nhare zviri nyore - zvishoma zvimwe zvakawanda pano.
Vakuru vateereri: Kunyangwe asiri munhu wese ane kana anoshandisa komputa nguva dzose, vanhu vazhinji uye vazhinji vanoshandisa mafoni avo zuva nezuva. Kugadzirira zano rako revateereri iro rinowedzera kusvika kwako.
Kukura: Kunyange zvichiratidzika sezvisingabviri kusaita kudaro, hukama huripo pakati pefoni mbozha neInternet chiitiko chitsva chine kukura kwakakura kugona.
Kurerukirwa kwekubhadhara: nzira dzakajairika dzekubhadhara dzatova 100% nhare-inoshamwaridzika.
Mhando dzakasiyana dzescreens: chishandiso chimwe nechimwe chine saizi yakasiyana, ndosaka zvisingaite kuita chitoro kuchinjika kune ese. Unogona kutarisa kuti webhusaiti yako inoonekwa sei pamidziyo yakasiyana neichi chishandiso chepamhepo.
Zvekuvanzika: Ipfungwa yakanaka yekuita kuti kubhurawuza kuve nyore, asi kuzvikanganisa nemameseji uye zviziviso zvinogona kutsamwisa.
Kufamba kwekufamba: kweiyo 5-inch screen isina mbeva, iwe unofanirwa kusarudza zvine hungwaru zvekuratidzira; isina kukwana nzvimbo yezvinhu zvese.
Tsika: kunyangwe kubhurawuza nhare kwakapfuura kweiyo PC, isu tichiri kusarudza komputa kana tichitenga. Zvakajairika kushandisa smartphone kungo tarisa uye kuenzanisa, asi mirira kuti utenge kubva kukombuta.
Kuti tibatsirwe zvizere nezvakanaka izvi uye kudzikamisa zvinokanganisa, ngatione zvatinofanira kufunga nezvazvo kudzivirira kurasikirwa nemutengi mumwe chete anoshanyira chitoro chedu kubva ku-smartphone.
5 makiyi ekushambadzira enhare ezvitoro zvepamhepo
Yese webhusaiti uye eCommerce zvakasiyana, asi nekushandisa iyi yakakosha mirau uchaona kuti haurasikirwe nemumwe mutengi se "bounce" nekuda kwekuti iwe wakaregeredza nzira dzekutanga dzekutengesa nhare.
Dhizaini dhizaini: Mumwe anogona kufunga kuti zviri pachena, asi kune akawanda zvitoro zvepamhepo zvine magadzirirwo asina kuchinjika kune nhare mbozha.
Dzivisa pop-ups: Kunze kwekuti ivo vari kuwedzera kuipa kweSEO, ivo vanotonyanya kunetsa pane diki skrini.
Usashandise bhaa repadivi: pane smartphone, padivi ichaonekwa pazasi pezvose, nekudaro ichirasikirwa nekubatsira kwayo kwese.
Saizi yemavara uye ruvara: usatsauke kubva mukubatanidzwa kwechena kumashure + dema font, maonero evaverengi vako anotenda iwe.
Ndima ipfupi: Chingaite senge chikamu chipfupi pane iyo huru skrini chinogona kukurumidza kuita hombe iyo inozotyisa mobile muverengi.
Uye ikozvino zvatinoziva zvekutanga, ngatipindei mune chimwe chinhu chakanyanya kongiri.
Maitiro ekugadzirisa chitoro chepamhepo chemafoni efoni
Kuti uratidze imwe vhezheni yechitoro chako chepamhepo pane iya yaunoona pakomputa yakajairika, une sarudzo mbiri: dhizaini inoteerera kana dura rakasiyana.
Anopindura kana kuchinja
Iyo imwecheteyo desktop vhezheni inoshandisa CSS (masitayiti machira) kukodzera zvidiki zvidiki. Iyo yakajairika nzira yekuchinjisa nayo ndeyokubvisa zvimwe zvinovhiringidza zvinhu senge inotsvedza kana mifananidzo.
Kazhinji, WordPress kana PrestaShop madingindira anochinjika nekutadza pasina kuda chero chiito pachikamu chako. Nekudaro, kana iwe uchida kugadzirisa chimwe chinhu, iwe unofanirwa kushandisa iyo midhiya mibvunzo.
Izvi zvanyanya kumberi, uye kana iwe usina kana chaunoziva nezve CSS, usazvidya moyo.
Midhiya mibvunzo mibvunzo yeCSS inotaurira zvekuratidzira kana kusaratidza zvichienderana nehukuru hwechidzitiro.
Nemutemo uyu tinogona kutsanangura mashandisiro atinoita kuti peji redu rewebhu riitarise kana skrini iri 320 x 480px. Aya ndiwo matanho akajairwa ema smartphones.
Neichi chimwe, kuwedzera kune mapikiseli, isu tinogona zvakare kudoma kutarisisa kwechiso. Kutanga pa700px uye pamusoro, isu tinowanzo taura nezve piritsi skrini.
Sezvaunogona kufungidzira, panenge paine risingaperi nhamba yemasanganiswa kana zvasvika kune ekukura kwemidziyo uye maitiro, handiti? Uku ndiko kunetsekana kwatakambotaura nezvako kare.
Iyi nzira inosanganisira kuve neyakasiyana vhezheni yewebhusaiti yako pane imwe URL, ndiko kuti, kwete kungoigadzirisa. Nenzira iyi, kana vashandisi vakabatana nemidziyo yavo nhare, iyo URL yenharembozha ndiyo yavanosvika.
Iwo mutemo ndewokushandisa 'm' pamberi peiyo yekutanga URL. Izvi ndozvinoita Twitter kuzviita, semuenzaniso. Kana iwe ukaenda ku https://m.twitter.com, iwe uchaona iyo mobile vhezheni kunyangwe iwe uri kushandisa komputa yako.
Zano redu nderekuti haufanire kuenda kure zvakadaro. Izvo zvinokwana zvakakwana kana yako e-commerce inogona kuoneka zvakajeka uye nyore pane diki skrini.
AMP, chirongwa cheGoogle chekufambisa nhare.
Unogona kunge watoona kare kuti kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu paGoogle, mimwe mhedzisiro inoratidzwa ine mucherechedzo uyu.
Icho chirongwa cheGoogle chinotarisana nekuvandudza nhare yekufambisa nhare. Iyo inomhanyisa iyo webhusaiti nekumisikidza iyo kune mameseji nemifananidzo, ichiita kuti itakurise zvakanyanya nekukurumidza.
Mumashoko aGoogle ega: "AMP yakanaka kune e-commerce nekuti AMP inoita kuti mawebhusaiti akurumidze, uye anokurumidza mawebhusaiti anosimudzira kutendeuka kwekutengesa."
Kugadzirisa yako WordPress chitoro kune AMP, unogona kushandisa imwe yeaya plugins:
AMP WooCommerce - Yemahara uye yakanyanya nyore kushandisa plugin.
WP AMP: yakabhadharwa plugin iyo inobvumidza iwe kuwedzera mavhidhiyo uye AdSense mireza, pakati pezvimwe zvinhu.
Nzira yakanaka yekutanga kujairana ne AMP ndeyekugadzirisa blog blog uye kuyera iko kugadzirisa mukutakura kumhanya usati watanga neWooCommerce.
Kana iwe ukashandisa PrestaShop, aya ma module anopa AMP kuchinjika:
AMP module: inodhura nezve 72,59 euros uye inokutendera iwe kuti ugadzire AMP mapeji ezvikamu, zvigadzirwa uye imba.
Google AMP - Iyi module inodhura zvakanyanya, asi yakakosha. Iyo inokutendera iwe kugadzirisa chero chero chinhu chaunogona kufunga nezvayo uye ichiita inoita masiti kanomwe nekukurumidza. Iwo ari 7 euros.
Imwe sarudzo yekupedzisira kugadzira yako application.
Iko kushandiswa kwekushandisa kunokurudzirwa chete kana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchitsvaga iko kunyorera kuti utenge kamwe chete MaAmazon, semuenzaniso, ndeimwe yeanonyanya kushandiswa mafomu, asi zvakare iri Amazon ...
Maitiro ekuona yako mobile traffic mu Analytics
Kana iwe uine kusahadzika pamusoro pekuti izvi zvigadziriso zvakakosha here kana zvasvika pakuvandudza yako nhare yekushambadzira nzira, unogona kutarisa kuwanda kwetraffic traffic kune yako e-commerce zvisati zvaitika.
Tichazoshandisa Google Analytics izvo.
Enda kudivi repadivi "Vateereri >> Nharembozha" uyezve "Ongororo". Ikoko iwe unogona kuona huwandu hwekushanya uye zviyero zvipi zvinobva kune mafoni, mahwendefa kana desktop.
Kana iwe uchida kuenda nhanho imwe kumberi, pasi pe "Midziyo" iwe unogona kunyange kuona kuti ndeapi machira ari kukushanyira iwe: iPhone, Galaxy, ...
Izvo zvakajairwa, sezvauri kuona, ndezvekuti huwandu hwe mobile uye piritsi hwakati kwirei zvishoma pane desktop.
Kana zvirizvo zvirimo newebsite yako futi, uye iwe usati waita chero chinhu nezvazvo kuti ugone vese avo vashandisi parizvino… usamirira zvakare!
Wakagadzirira here kuti vashandisi vako ve nhare vade murudo?
Funga nezvako iwe uchiedza kushandisa zvakanakisa yako yemahara nguva kana iwe uri kushandisa yeruzhinji zvifambiso kana kumirira mumwe munhu. Iwe unofanirwa kunge wakatenga chimwe chinhu mune imwe yenguva idzodzo.
Chitoro chedu chepamhepo chinofanira kugara chakagadzirira kushanyirwa, zvisinei kuti zvinosvika riini kana kuti sei.
Tevedza nhanho dziri mune ino positi nekuti pamusoro pekutengesa zvimwe, iwe zvakare uchavandudza yako positioning pawebhu.
Kutenga pamhepo iri fomu yekutengesa zvemagetsi inobvumidza vatengi kutenga zvakananga zvinhu kana masevhisi kubva kumutengesi pamusoro peInternet vachishandisa webhu browser. Vatengi vanowana chigadzirwa chekufarira nekushanyira webhusaiti yemutengesi zvakananga kana nekutsvaga kuburikidza nevamwe vatengesi vachishandisa injini yekutsvaga, iyo inoratidza kuwanikwa uye mutengo wechigadzirwa chimwe chete muma e-zvitoro zvakasiyana. Kutanga muna 2020, vatengi vanogona kutenga pamhepo vachishandisa akati wandei akasiyana emakomputa uye zvishandiso, kusanganisira madhesiki, malaptop, mapiritsi, mafoni, uye smart speaker.
Chitoro chepamhepo chinomutsa fananidzo yekutenga zvigadzirwa kana masevhisi pane zvakajairwa "zvidhinha nedhaka" mutengesi kana zvitoro; Maitiro acho anonzi bhizinesi-kune-mutengi (B2C) online online shopping. Kana chitoro chepamhepo chikamisikidzwa kubvumidza mabhizinesi kutenga kubva kune mamwe mabhizinesi, maitiro acho anonzi bhizinesi-kune-bhizinesi (B2B) online online shopping. Chairo chitoro chepamhepo chinobvumidza mutengi kutarisa mhando yezvigadzirwa nemasevhisi ekambani, ona mafoto kana mifananidzo yezvigadzirwa, pamwe neruzivo nezve izvo zvinotsanangurwa, maficha uye mitengo yezvimwe chete.
Zvitoro zvepamhepo zvinowanzo bvumidza vatengi kuti vashandise "kutsvaga" mabasa kuti vawane chaiwo mamodheru, mabhureki, kana zvinhu Vatengi vepamhepo vanofanirwa kuve neInternet kuwana uye nzira yekubhadhara inoshanda kuti vapedze kutengeserana, senge kiredhiti kadhi, iyo Interac-inogoneswa kiredhiti kadhi, kana sevhisi senge PayPal. Kune zvigadzirwa zvepanyama (semuenzaniso, muhomwe mabhuku kana zvipfeko), e-mutengesi anotumira zvigadzirwa kumutengi; Zvezvigadzirwa zvemadhijitari, zvakaita semadhijitari odhiyo mafaera enziyo kana zvirongwa zvemakomputa, e-mutengesi anowanzo tumira iyo faira kumutengi pamusoro peInternet. Makuru pane ese emakambani ekutengesa epamhepo ndiAlibaba, Amazon.com, uye eBay.
Kunyangwe kubhurawuza nhare kwakapfuura iyo kwePC, isu tichiri kusarudza komputa kana tichitenga. Zvakajairika kushandisa smartphone kungo tarisa uye kuenzanisa, asi mirira kuti utenge kubva kukombuta. Sezvaunogona kufungidzira, panenge paine risingaperi nhamba yemasanganiswa
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » Nharembozha Kutenga muecommerce
Shanduko yebasa renzvimbo dzekudyidzana muecommerce